किन चल्छ विवाहित जोडीको बाहिर अफेयर ? जान्नुहोस् « News24 : Premium News Channel
किन चल्छ विवाहित जोडीको बाहिर अफेयर ? जान्नुहोस्
विवाह पश्चात अफेयर चल्नुको पक्कै केही कारण हुन्छ नै । आफ्नो वैवाहिक जीवनमा खुशी नहुनु वा नयाँ केही गर्ने ईच्छा पलाउनु पनि हुन सक्छ । यस बारे विस्तृत जानौं ।
नयाँ केही गर्ने ईच्छा:
यौन चाहानाको कारण:
सम्बन्धमा आउने दरार:
आत्मसम्मानको खोजीमा :
सामाजमा आएको खुलापन:
यो कुरा साँचो हो की आजको समयमा विवाह पश्चातको सम्बन्ध निकै चर्चा र बहसको बिषय बनेको छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रमा महिला र पुरुष काँधमा काँध मिलाएर काम गर्नु पर्नेछ । यस समयामा महिलासँग आफ्नो भावना साटासाट गर्ने क्रम सुरु हुन्छ र अन्ततः चाहेर वा नचाहेर सम्बन्ध रहन पुग्छ । यसले गर्दा पुरुष अर्काे वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्न राजी हुन्छ र आफ्नो श्रीमतिलाई धोका दिन पछि हट्दैन ।
तडकभडक गर्ने आदत: